ကြွေလွင့်သွားတဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသားလေး ထီဆန်ဝမ်ဖီအတွက် အလှူငွေကို တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း….. – Cele Snap
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အသံချိုချိုလေး နဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေ သီဆိုတတ်ပြီး အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်အချစ်တွေကို အခိုင်အမာရရှိထားသူကတော့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်းနဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းတို့ရဲ့ ညီမအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းကတော့ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲအတွင်း လမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ အားကြိုးမာန်တတ်ပါဝင်နေသလို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလည်း အကောင်းဆုံးပါဝင်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းက လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျအားတတ်သရော လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်းက ကျဆုံးသွားတဲ့ အသက်(၁၉)နှစ်အရွယ် ကချင်တိုင်းရင်းသားလေး ထီဆန်ဝမ်ဖီ (ခ) ဖီထွန်း အတွက်လည်း အလှူငွေတွေလှူဒါန်းပြီး ဖေးမကူညီခဲ့ပါတယ်..။ “လူညီရင် အရှေ့ထွက်တိုက်လို့ရပြီ”လို့ ပြောပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပါးကိုထိမှန် ကျဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီး တစ်ခြားသူတွေကို ထိမှာစိုးလို့ သူ့ကိုပစ် သူ့ကိုပစ်ဆိုပြီး ရဲရင့်လှစွာနဲ့ သူ့အသက်ကိုစတေးပြီး အခြားလူတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ အာဇာနည်သူရဲကောင်းလေး ဖီထွန်းအတွက် ဆွိဝတ်ရည်သောင်းက အလှူငွေတွေနဲ့ ဖေးမကူညီခဲ့တာပါ..။
“မောင်လေး Phi Tun အတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လေး သွားလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကူငွေထည့် တာတောင် လက်မခံဘူး ။ သူ့အကိုလက်ထဲအတင်းထည့်ပေးခဲ့ရတယ် ။ တစ်ကယ်ရိုးသားလွန်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားလေးတွေပါ …. RIP ပါ မောင်လေး Phi Tun ရေ..” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြထားတာပါ..။ ယူကြုံးမရစွာနဲ့ ဝမ်းနည်းစကားလေးပြောရင်း အလှူငွေတွေလှူခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းရဲ့ အလှူလေးကိုလည်းသာဓုခေါ်ကာ ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းလေးအတွက်လည်း ပရိသတ်တွေက ဆုတောင်းပေးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိသတျကွီးရေ.. အသံခြိုခြိုလေး နဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတှေ သီဆိုတတျပွီး အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျအခဈြတှကေို အခိုငျအမာရရှိထားသူကတော့ နှငျးဝတျရညျသောငျးနဲ့ အေးဝတျရညျသောငျးတို့ရဲ့ ညီမအငယျဆုံးလေးဖွဈတဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ..။ ဆှိဝတျရညျသောငျးကတော့ တျောလှနျရေး တိုကျပှဲအတှငျး လမျးပျေါထှကျလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ခှနျအားအပွညျ့နဲ့ အားကွိုးမာနျတတျပါဝငျနသေလို တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနလေညျး အကောငျးဆုံးပါဝငျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ..။
ဖဖေျောဝါရီလအစပိုငျးကတညျးက လူထုလှုပျရှားမှုတှကေို ကိုယျတိုငျ ကိုယျကအြားတတျသရော လုပျဆောငျနတေဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျးကတော့ သင်ျဃနျးကြှနျးက ကဆြုံးသှားတဲ့ အသကျ(၁၉)နှဈအရှယျ ကခငျြတိုငျးရငျးသားလေး ထီဆနျဝမျဖီ (ခ) ဖီထှနျး အတှကျလညျး အလှူငှတှေလှေူဒါနျးပွီး ဖေးမကူညီခဲ့ပါတယျ..။ “လူညီရငျ အရှထှေ့ကျတိုကျလို့ရပွီ”လို့ ပွောပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲ ပါးကိုထိမှနျ ကဆြုံးသှားတာဖွဈပွီး တဈခွားသူတှကေို ထိမှာစိုးလို့ သူ့ကိုပဈ သူ့ကိုပဈဆိုပွီး ရဲရငျ့လှစှာနဲ့ သူ့အသကျကိုစတေးပွီး အခွားလူတှကေို အတတျနိုငျဆုံးကာကှယျပေးခဲ့တဲ့ အာဇာနညျသူရဲကောငျးလေး ဖီထှနျးအတှကျ ဆှိဝတျရညျသောငျးက အလှူငှတှေနေဲ့ ဖေးမကူညီခဲ့တာပါ..။
“မောငျလေး Phi Tun အတှကျ ကိုယျတတျနိုငျသလောကျလေး သှားလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ အကူငှထေညျ့ တာတောငျ လကျမခံဘူး ။ သူ့အကိုလကျထဲအတငျးထညျ့ပေးခဲ့ရတယျ ။ တဈကယျရိုးသားလှနျးတဲ့ တိုငျးရငျးသားလေးတှပေါ …. RIP ပါ မောငျလေး Phi Tun ရေ..” ဆိုပွီး စိတျမကောငျးစှာ ပွောပွထားတာပါ..။ ယူကွုံးမရစှာနဲ့ ဝမျးနညျးစကားလေးပွောရငျး အလှူငှတှေလှေူခဲ့တဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျးရဲ့ အလှူလေးကိုလညျးသာဓုချေါကာ ကဆြုံးသှားတဲ့သူရဲကောငျးလေးအတှကျလညျး ပရိသတျတှကေ ဆုတောငျးပေးထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။
နိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာပါသိအောင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကို ချပြခဲ့တဲ့ အလှမယ်ဟန်လေးကို လေးစားဂုဏ်ယူမိကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ညီနန္ဒ